तपाईंले क्लिनिकमा बूकिङ्ग गर्नुहोस | अनलाईन बुकिंङ्ग गर्ने वेब
मुख्य मेनु हाम्रो बारे EN | नेपाली
तपाईंलाई स्वागत छ! यो वेबसाईटबाट सेवाहरुको लागि बुकिंङ्ग गर्न धेरै छिटो र सजिलो छ। त्यसका लागि तलका चरणहरू पछ्याउनुहोस्।
नमस्कार! तपाईंको भर्चुअल/अनलाईन सल्लाहकारलाई भेट्नुहोस्। हामी तपाईंलाई तपाईंको यौन स्वास्थ्यको अवस्था र आवश्यकताहरूबारे थाहा पाउन मद्दत गर्नेछौं।
के तपाई यो लेखाजोखामा भाग लिन चाहानुहुन्छ?
खेल खेलौं !
तलको नोटमा मेरो समर्थन छ
*नोट: यो वेबसाइटमा संकलन गरिएको सूचनाहरु कार्यक्रमको प्रयोगको लागि मात्र हो । यो सूचनाहरुले, तपाईंको परिचय निर्धारण वा पहिचान गर्न प्रयोग गरिने छैन। जब यो वेबसाइटले तपाईंको स्थानको बारेमा सूचनाको लागि अनुरोध गर्दछ, जोखिमको सूचना, वा एचआइभी अवस्थाको बारेमा सोध्दछ, त्यो सूचनाहरु हाम्रो तर्फबाट तपाईंलाइ सल्लाह सुझाव दिनको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ, साथै तपाईंलाई उपयुक्त र पायक पर्ने क्लिनिकको विकल्पहरू प्रदान गर्न र अनलाइन प्रक्रियाबाट भेटेको तथ्यांक बुझ्नका लागि प्रयोग हुनेछ । हामी तपाईंको सूचनाहरु गोप्य रहने र कसैलाई थाहा नदिने सुनिश्चित गर्नेछौं ।
निर्णय गर्न मद्दत गर्नुहोस्
तपाईलाई कुन सेवाहरु उपयुक्त छन् भनेर छनौट गर्न मद्दत चाहनुहुन्छ ?
जोखिम मुल्याङ्कनको खेल खेलौं ।
मलाई फोन गर्नुहोला
सेवाहरुको बुकिङ्ग गरौं
मेरोसाथीमा उपलब्ध सेवाहरुमध्ये आफुलाई चाहिने सेवाहरु छान्नुहोस्
एचआइभी सेल्फ टेस्टिङ्ग
एचआइभीको उपचार (एआरटी)
भाइरल लोड जाँच
प्रि—एक्सपोजर प्रोफाइल्याक्सिस (प्रेप)
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाईलाक्सिस (पेप)
हिंसा पश्चातका सेवाहरु
होम डेलिभरी सेवा
तपाईंको जन्म मिति बताईदिनुहोस् ।
तपाईंले अन्तिम पटक कहिले एचआइभी जाँच गर्नु भएको थियो
पछिल्लो तीन महिनामा जाँच गरेको
तीन देखि छ महिना अघि
केही समयअघि – ६ महिना भन्दा बढी भयो
यदि मैले तपाईंको एचआइभीको अवस्थाबारे सोधे भने, तपाईं के भन्नुहुन्छ ...
कहिल्यै परिक्षण गरिएको छैन
के तपाईंले प्रेप लिने गर्नुभएको छ ? प्रेप दिनको एउटा चक्कि लिईने औषधी हो जसले एचआईभी लाग्नबाट बचाउँछ ।
म प्रेप दिनहुँ लिन्छु
म चाहिएको समयमा प्रेप लिन्छु
म प्रेप लिन्नँ
के तपाईं हाल एआरभी औषधि सेवन अर्थात् एचआइभीको औषधि उपचार गरिरहनुभएको छ?
हो, म संधै एआरभी औषधि सेवन गर्छु
म सधैँ एआरभी औषधि सेवन गर्दिन
एआरभी औषधि उपचारमा छैन
मैले एआरभी औषधि लिन छाडिदिए
तलमध्ये कुन तपाईलाई लागु हुन्छ ?
म प्रेप हेरचाह (एसटिआई जाँच र प्रयोगशाला जाँच) का लागि मेरो डाक्टरलाई नियमित भेट्छु ।
म डाक्टरलाई डाक्टरलाई नियमित नभेटि प्रेप लिन्छु
निम्नमध्ये कुन तपाईसँग मेल खान्छ ?
मेरो भाईरल लोड सप्रेस भएको वा नगण्य भएको (डाक्टरका अनुसार)
मलाई आफ्नो भाईरल लोडका बारेमा थाहा छैन । तर म पछिल्लो छ वा सो भन्दा बढि महिनादेखि एचआईभीको उपचारमा छु
अझै केहि बेर
माथिका मध्ये कुनैपनि हैन, वा निश्चित छैन
तपाईंले आफुलाई कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ
म भन्न चाहदिन
तपाई जन्मदाको लिङ्ग के थियो?
म भन्न चाहन्न
तपाईं को-को सँग यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ ?
मिल्ने जतिमा चिन्ह लगाउनुहोस्।
कसैसँग पनि राख्दिन
के तपाईंले पछिल्लो एचआईभी जाँच पछि तलमध्ये कुनै अनुभव गर्नुभएको छ?मिल्नेजति सबै छान्नुहोस् ।
के तपाईंले हालैमा तलमध्ये कुनै अनुभव गर्नुभएको छ?मिल्नेजति सबै छान्नुहोस् ।
कण्डम बिना यौन सम्पर्क भएको वा कण्डम च्यातिएको
कसैसंग सुई—सिरिन्ज साटासाट गरेको
माथिका कुनैपनि छैन
केही व्यवहारहरुले एचआईभीको जोखिम बढाउँछ। के तपाईलाई पछिल्लो ६ महिनामा निम्नमध्ये केही व्यवहारहरु गरेको याद छ ? मिल्नेजति सबै छान्नुहोस्
💉 स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना सुईको प्रयोगले लागु औषध लिएको
💸 यौन सम्पर्क बापत पैसा वा जिन्सि सामान लिएको
💞 एकभन्दा बढि यौन साथीहरु भएको
😶 सहमति बिना यौन सम्पर्क भएको
🦠 यौन रोगहरु भएको वा त्यसका लक्षणहरु देखिएको
🍷💊 रक्सी वा लागु औषध सेवन गरी यौन सम्पर्क राखेको
💊 हाई फन (उत्तेजक लागु औषधको प्रयोग गरी यौन सम्पर्क राखेको जस्तै क्रिष्टल मेथ, टिना वा जिएचबि)
🍑🍆सेक्स पार्टिमा गएको
💸यौन सम्पर्कका लागि पैसा दिएको
😢 यौन साथीले चोट दिएको वा कुटपिट गरेको (शारीरिक, भावनात्मक वा आर्थिक)
🚫 माथिको कुनै पनि हैन
तपाईं आफ्नो एआरभी औषधी दिन दिनै खान नबिर्सिनुहोला । स्वस्थ रहन र भाइरल लोड कम भएको नभएको थाहा पाउनका लागि भाईरल लोडको जाँच गर्नु जरुरी छ । भाईरल लोड जाँचका लागि तल बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
प्रश्नहहरु छन् ? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लागि नै उपलब्ध छौं ।
तपाईं यौन रोगहरुको जोखिममा पनि हुनसक्ने अवस्था भएकाले आज नै यौनरोग (एसटिआई) जाँचका लागि तल बुकिङ्ग गर्नुहोस्।
प्रश्नहहरु छन् ? हामीसँग अनलाईन कुराकानी(च्याट) सुरु गर्नुहोस्, हामी तपाईंहरुको सहयोगको लगि उपलब्ध छौं।
तपाईं भाईरल लोड सप्रेसनको नजिक हुनुहुन्छ । स्वस्थ्य जीवन र एचआईभी सार्न सकिने जोखिम कम गर्नका लागि एआरभी औषधी दिनहुँ खानुहोस् र भाईरल लोड जाँच पनि गर्नुहोस् । भाईरल लोड जाँचका लागि तल बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
प्रश्नहहरु छन्? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि नै उपलब्ध छौं ।
तपाईंको भाईरल लोड सप्रेसनको नजिक हुनुहुन्छ । स्वस्थ्य जीवन र एचआईभी सार्न सकिने जोखिम कम गर्नका लागि एआरभी औषधी दिनहुँ खानुहोस् र भाईरल लोड जाँच पनि गर्नुहोस् । भाईरल लोड जाँचका लागि तल बुकिङ्ग गर्नुहोस्।
तपाईंले गर्नसक्ने अन्य कार्यहरुः
1. तपाईं यौन रोगहरुको जोखिममा पनि हुनसक्ने अवस्था भएकाले आज नै यौनरोग (एसटिआई) जाँचका लागि बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
2. तपाईंले अरुलाई पनि एचआईभीको जोखिममा पारेको हुनसक्छ, त्यसैले आज नै आफ्ना साथीहरुलाई एचआईभी जाँचका लागि गोप्य रुपमा रिफर गर्नुहोस् ।
प्रश्नहरु छन्? हामीसँग अनलाईन कुराकानी (च्याट) सुरु गर्नुहोस्, हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि उपलब्ध छौं ।
दिनहुँ एआरभी औषधी खाएर तपाईं आफ्नो जीवन ढुक्क भई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । ६ महिनासम्म दिनहुँ एआरभी औषधी खाएमा तपाईमा भएको भाइरसको असर कमगर्दै लैजान्छ र एचआईभी अरुमा सर्ने जोखिम पनि कम गर्दछ। तल एआरटी सेवाको बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
तपाईंले गर्नसक्ने अन्य कार्यहरुः:
1. एचआईभी सर्नबाट रोकथामका लागि हरेक पटकको यौन सम्पर्कमा कण्डम तथा लुबको प्रयोग गर्नुहोस् ।
प्रश्नहहरु छन् ? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि नै उपलब्ध छौं ।
दिनहुँ एआरभी औषधी खाएर तपाईं आफ्नो जीवन ढुक्क भई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । ६ महिनासम्म दिनहुँ एआरभी औषधी खाएर तपाईँमा भएको भाइरसको असर कम गर्दै लैजान्छ र एचआईभी अरुमा सर्ने जोखिम पनि कम गर्दछ । तल एआरटी सेवाको बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
प्रश्नहरु छन् ? हामीसँग अनलाईन कुराकानी (च्याट) सुरु गर्नुहोस्, हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि उपलब्ध छौं ।
दिनहुँ एआरभी औषधी खाएमा तपाईं आफ्नो जीवन ढुक्क भई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ६ महिनासम्म दिनहुँ एआरभी औषधी खाएमा तपाईंमा भएको भाइरसको असर कमगर्दै लैजान्छ र एचआईभी अरुमा सर्ने जोखिम पनि कम गर्दछ । तल एआरटी सेवाको बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
दिनहुँ एआरभी औषधी खाएर तपाईं आफ्नो जीवन ढुक्क भई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । ६ महिनासम्म दिनहुँ एआरभी औषधी खाएमा तपाईँमा भएको भाइरसको असर कमगर्दै लैजान्छ र एचआईभी अरुमा सर्ने जोखिम पनि कम गर्दछ । तल एआरटी सेवाको बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
1. तपाईं यौन रोगहरुको जोखिममा पनि हुनसक्ने अवश्था भएकाले आज नै यौनरोग (एसटिआई) जाँचका लागि बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
3. एचआईभी सर्नबाट रोकथामका लागि हरेक पटकको यौन सम्पर्कमा कण्डम तथा लुबको प्रयोग गर्नुहोस् ।
दिनहुँ एआरभी औषधी खाएमा तपाईं आफ्नो जीवन ढुक्क भई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । ६ महिनासम्म दिनहुँ एआरभी औषधी खाएमा तपाईंमा भएको भाइरसको असर कमगर्दै लैजान्छ र एचआईभी अरुमा सर्ने जोखिम पनि कम गर्दछ । तल एआरटी सेवाको बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
2. तपाईंले अरुलाई पनि एचआईभीको जोखिममा पारेको हुनसक्छ, त्यसैले आज नै आफ्ना साथीहरुलाई एचआईभी जाँचका लागि गोप्यरुपमा रिफर गर्नुहोस् ।
3. एचआइभीको रोकथामका लागि हरेक पटकको यौन सम्पर्कमा कण्डम तथा लुबको प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रश्नहहरु छन्? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि नै उपलब्ध छौं।
प्रश्नहहरु छन्? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि नै उपलब्ध छौं
तपाईंको जवाफहरुका आधारमा तपाईं एचआइभी वा यौन रोगको जोखिममा हुनुहुन्न।
प्रश्नहरु छन्? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि नै उपलब्ध छौं।
1. यौन रोग सर्नबाट रोकथामका लागि हरेक पटकको यौन सम्पर्कमा कण्डम तथा लुबको प्रयोग गर्नुहोस् ।
2. एचआइभीबाट बच्नका लागि प्रेपको प्रयोग निरन्तर राख्नुहोस् ।
प्रश्नहहरु छन् ? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि नै उपलब्ध छौं।
स्वास्थ्यकर्मीसँगको लगातारको परामर्शबाट तपाईंले प्रेप सम्बन्धी धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ । तपाईंको स्वास्थ्यकर्मीले तपाईँलाई प्रेपको प्रयोग, यसका नराम्रा असरहरु कम गर्न र हरेक तीन महिनाको फरकमा स्क्रीनिंग गर्न सहयोग गर्नेछन् । प्रेपको हेरचाहका लागि तलको प्रेप सेवा बुकिङ्क गर्नुहोस् ।.
2.एचआइभीबाट बच्नका लागि प्रेपको प्रयोग निरन्तर राख्नुहोस् । तपाईं खाई रहेको प्रेपको बारेमा सोध्न, नकारात्मक असरहरु व्यवस्थापन गर्न, र हरेक तीन महिनाको फरकमा स्क्रीनिंग गर्न स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग लिनुहोस् ।
तपाईंको जवाफहरुका आधारमा तपाईं एचआईभी वा यौन रोगको जोखिममा हुनुहुन्न ।
प्रश्नहरु छन्? हामीसंग अनलाईन कुराकानी सुरु गर्नुहोस् । हामी तपाईंहरुको सहयोगका लगि नै उपलब्ध छौं ।
जोखिम मापन गर्दा केही समस्या आएजास्तो देखिन्छ, फेरि प्रयास गर्नुहोस् वा सहायताका लागि हामीसँग कुराकानी गर्नुहोस् ।
तपाईंका लागि सेवाहरु
हिंसा पछिका हेरचाह
साथीलाई रिफर गरौं
कुनैपनि सेवाको लागि बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।
फेरि प्रयास गरौं